မူလစာမျက်နှာ > အောင်မြင်မှုမှတ်တမ်း > Home Improvement Hirose
Net Shopping Group Leader
Mr. Hiroaki Abe
Home Center နှင့် စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းစတိုးဆိုင်လုပ်ငန်း Chain Store ကိုတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်။
မိမိတို့ကုမ္ပဏီသည်စီးပွားရေးပုံစံအသစ်အဖြစ်ပုံစံအသစ်ဖြစ်သော Community-based Distount Store(Trend's) စတိုးဆိုင်များနှင့်သမရိုးကျ Home Centere များ၏ non-food ကုန်ပစ္စည်းများအပြင်စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများကိုပါထပ်မံဖြည့်စွက်၍ "Super Combo" ကိုတိုးချဲ့တည်ထောင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
လုပ်ငန်းအသေးစိတ်အထိစီမံလည်ပတ်ရန်အတွက်ကုန်ပစ္စည်းပုံများပုံသားဖြတ်ခြင်း၊အွန်လိုင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းစသည့် Online Shop ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုမိမိတို့ကုမ္ပဏီအတွင်းလုပ်ဆောင်ရန်ခက်ခဲသည့်အခြေအနေများကြောင့် ပြင်ပကိုအပ်နှံခြင်း (Outsourcing) ကိုအကျိုးသက်ရောက်စွာအသုံးချပြီး Online Shop ၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုချဲ့ထွင်ရေးမှာပိုမိုအရေးပါလာသည်။
ယနေ့အချိန်တွင်အလားတူ (Online Shop) ကုမ္ပဏီများမှာ Amazon Seller ကိုအဓိကဗဟိုပြုသည့်စီးပွားရေးတိုးချဲ့လျက်ရှိပြီး၊ Amazon Seller ၏ကုန်ပစ္စည်းသတင်းအချက်အလက်များကိုအခြေခံ၍ Yahoo Shop သို့ဆက်လက်တိုးချဲ့မှုများလည်းရှိနေသည်။ Yahoo Shop မှာရောင်းအားမြှင့်တင်မှုများအလျင်စလိုလုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အ​ခြေအနေမျိုးတွင်ကုန်ပစ္စည်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းစနစ်၏တိုးတက်မြန်ဆန်မှုမရှိသေးသောအခြေအနေများကလည်း ဆက်လက်ဖြစ်တည်နေဆဲဖြစ်သည်။
ပုံများဖန်တီးပြုလုပ်ခြင်း(ကုန်ပစ္စည်းပုံသားဖြတ်ထုတ်ခြင်းနှင့် Thumbnail Image ဖန်တီးခြင်း) ကို Simple'Z ကုမ္ပဏီသို့ယုံကြည်စွာအပ်နှံပါ!
ပုံသားဖြတ်ထုတ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းကိုအဆောတလျင်လိုအပ်သည့်အခါမျိုးတွင် စိတ်ပေါ့ပါးစွာအလွယ်တကူအပ်နှံနိုင်သည်။ အရည်အသွေးမြင့်ပုံသားအချောများအား အချိန်တိုအတွင်းပြန်လည်ပေးပို့နိုင်ပြီး၊ပုံ ၁၀၀ လောက်ဆိုလျှင် နေ့ချင်းအပြီးအချောသတ်ပြန်လည်ပေးပို့နိုင်ကြသည်။
ကုန်ပစ္စည်းမှတ်ပုံတင်ရန် data တည်ဆောက်ခြင်းအတွက် Simple'Z သို့ယုံကြည်စွာအပ်နှံပါ!
Yahoo Shop သို့ကုန်ပစ္စည်းမှတ်ပုံတင်ရန် data စီစစ်ဖန်တီးခြင်းများကို Simple'Z သို့ယုံကြည်စွာအပ်နှံနိုင်ပါသည်။၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ၄လပိုင်း(မြန်မာနှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ပိတ်ရက်များကြောင့်) Simple'Z ကုမ္ပဏီသည် ဖွင့်ရက်နည်းပါးပြီးအလုပ်ရက်(၁၇)ရက်လောက်သာရှိခဲ့သော်လည်းကုန်ပစ္စည်း၃၀၀၀မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ data တည်ဆောက်ခြင်းကိုလက်ခံဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
ထို့ကြောင့်တစ်လလျှင်ကုန်ပစ္စည်း၅၀၀၀ကို Cost Down ဖြင့်အပ်နှံနိုင်ခဲ့ပြီး Yahoo Shop မှာအရောင်းမြှင့်တင်ခြင်းကိုရည်ရွယ်ချက်ထားနိုင်ခဲ့ပါသည်။
Home Improvement Hirose Co.,Ltd ရဲ့ပြောကြားချက်
Amazon Seller မှာလုပ်ငန်းလည်ပတ်စေရင်းအသစ်တည်ထောင်ထားသော Yahoo Shop တွင်လည်းကုန်ပစ္စည်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ပုံများဖြတ်ထုတ်ဖန်တီးခြင်းကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့ရသောကြောင့်မှတ်ပုံတင်မည့်ကုန်ပစ္စည်း data များရှိနေလျက်နှင့်အလုပ်မတွင်ကျယ်သောအနေအထားတွင် ပုံများဖန်တီးမှုတာဝန်ယူခြင်းအပိုင်းကို မိမိတို့ဝန်ထမ်းများကမလှည့်နိုင်သည့်အခြေအအနေကြောင့်အပြီးသတ်ရန်အချိန်ကြာမြင့်ရပြန်သည်။ Simple'Z ကုမ္ပဏီသို့အလုပ်အပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ဖြစ်စေခဲ့သည့်အချက်မှာ စုံစမ်းမေးမြန်း၊ညှိနှိုင်းရာတွင်ပြန်လည်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှု၏အမြန်နှုန်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းမှုပြီးသည့်နောက်တွင်လဲအချောသတ်နမူနာပုံစံ data ကို(အတည်ပြုနိုင်ရန်အတွက်) မြန်ဆန်စွာပေးပို့လာမည်ဖြစ်သည်။ အရည်အသွေးကလဲ မြင့်ပါသည်။ထပ်မံ၍ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းများကိုငှားရမ်းရမည့်အထက်ပါအခြေအနေတွင် ကုန်ကျစရိတ်လျော့ချနိုင်​သော Simple'Z ကုမ္ပဏီကိုမှန်ကန်စွာရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
Yahoo Shop ဆိုင်များတွင်ကုန်ပစ္စည်းများကိုစုံလင်စွာတိုးချဲ့ရန် ဦးတည်လျက်ရှိပြီးနောင်များတွင်လည်းလက်တွဲလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သောကြောင့် (Simple'Z ကုမ္ပဏီမှ) ဆက်လက်ကူညီပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။